ပင်မစာမျက်နှာ > 2021 ခုနှစ်တွင် Alpha GPC ၏အကောင်းဆုံး Nootropic ဖြည့်စွက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်အကောင်းဆုံး nootropic ဖြည့်စွက် alpha GPC 2021 ခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Cofttek Alpha GPC ။ ဤဖြည့်စွက်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းသည်သက်သတ်လွတ် / သက်သတ်လွတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းက၎င်းကိုယူနိုင်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဖြည့်စွက်ချက်တွင်ဂျုံ၊ ဂလူး၊ နို့၊ ကြက်ဥ၊ ငါးနှင့်အခွံမာသီးမပါ ၀ င်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်မတည့်သူများအတွက်စားသုံးရန်သင့်တော်သည်။ သို့သော်သင့်တွင်ယခင်အခြေအနေများရှိပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်အရင် ဦး စွာပြောဆိုရမည်။ ဒါ နောကျဆကျတှဲ အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသာရရှိခဲ့နှင့်လုပ်ဖို့ဆိုပါတယ်အတိအကျဘာလုပ်နေလဲ။
Alpha GPC ကဘာတွေလဲ။
Alpha GPC အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
Alpha GPC ကသင့်ကိုပင်ပန်းစေသလား။
အာလဖ ဦး နှောက်မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသလား။
Alpha GPC နဲ့ CDP choline တွေကိုအတူတူယူလို့ရမလား။
Alpha GPC ဟာသဘာဝလား။
အာလဖ ဦး နှောက်ဘေးကင်းလုံခြုံပါသလား။
Alpha ဦး နှောက်၏သက်ရောက်မှုသည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း။
Alpha ဦး နှောက်ကတကယ်အလုပ်ဖြစ်သလား။
ဂျိုး Rogan သည် Alpha ဦး နှောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသလား။
အာလဖရဲ့ ဦး နှောက်ဟာတရားဝင်လား။
အကောင်းဆုံး Nootropic ဖြည့်စွက်ကဘာလဲ?
Alpha GPC ဟာ HGH တိုးလာသလား။
အာလဖရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာဘာရှိသလဲ။
Alpha GPC သည် dopamine တိုးသလား။
Alpha GPC ကဘယ်လောက်မြန်သလဲ။
Alpha GPC ကဘာကိုအရသာရှိသလဲ။
citicoline သည် choline နှင့်တူညီသလား။
citicoline သည် dopamine ကိုတိုးပွားစေပါသလား။
choline နှင့် phosphatidylcholine အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
ကိုလက်စ်သည် serotonin ကိုတိုးပွားစေပါသလား။
Alpha GPC ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။
Alpha GPC ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာအလုပ်လုပ်ရမလဲ။
Alpha GPC ရေသို့မဟုတ်အဆီပျော်ဝင်မှုရှိပါသလား။
အာလဖ ဦး နှောက်ကိုသုံးလို့ရလား။
နေ့တိုင်း Alpha GPC ကိုယူလို့ရပါသလား။
စျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံး ဦး နှောက်ဆေးပြားကဘာလဲ။
ကော်ဖီသည် Nootropic လား။
ဘယ် Nootropics အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်?
CBD သည် Nootropic လား။
Alpha GPC ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ။
alpha GPC အုပ်ချုပ်ရေး neurotransmitter acetylcholine ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်လွယ်ကူချောမွေ့။ အားကစားသမားများတွင် Alpha GPC ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်သွေးတွင်းကိုလက်စ်ပမာဏလျော့ကျစေသည်။
Alpha GPC သည် ၆ ရက်ထပ်တိုးပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပြများသည်ကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အားကစားအရှိန်အဟုန်ကိုအာဟာရနှင့်အာဟာရအားဖြည့်စွက်ရန် Alpha GPC ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ညတွင်သင့်ကို ပို၍ ပင်ပန်းစေသော်လည်းတစ်နေ့တာအတွင်းသင်၏စိတ်လုပ်ခဲ့သည့်အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကြောင့်ယင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်နေ့လုံးသင်မှတ်မိနေသည့်မှတ်ဥာဏ်များကိုသင့်စိတ်ထဲအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်ရန်အိပ်စက်ဖို့လိုသည်။
Alpha Brain ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအလွန်ရှားပါးသည်။ Alpha Brain ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြည့်စွက်မှု၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာမရှိပါ။
အလွန်အမင်းကိုလက်စထရောကိုအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်ငါး၏ခန္ဓာကိုယ်၏အနံ့၊ အော့အန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်တံတွေးထွေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်အသည်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောသုတေသနများအရကိုလက်စ်ပမာဏမြင့်မားစွာဖြင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများစေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။
ဤရွေ့ကားကိုလင်းဓာတ်ဖြည့်စွက်အတူတကွကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ … Alpha GPC သည် phosphatidylcholine (PC) ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဖြည့်စွက်ထားသော CDP Choline သည် PC synthesis အတွက်လိုအပ်သော uridine ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါကြောင့်အတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်ရင်မင်း ဦး နှောက်ကိုဆယ်လူလာအဆင့်မှာလိုအပ်တဲ့ choline အမျိုးအစားကိုပေးတယ်။
Alpha GPC သည် ဦး နှောက်အတွင်း၌နေထိုင်သောသဘာဝဖြစ်ပေါ်နေသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရေးကြီးသောအာဟာရဓာတ်သည်ဗီတာမင်ဘီနှင့်မိသားစုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆဲလ်အမြှေးပါးအာရုံခံဆဲလ်များ၌နေထိုင်သည်။
Alpha Brain သည်အလုံခြုံဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် nootropic ဖြည့်စွက်. သို့သော်၊ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ စားသုံးသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဆေးဝါး အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် အနည်းငယ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အကြံပြုထားသော ဆေးပမာဏကို မှီဝဲရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် nootropic ဖြည့်စွက်စာကိုမဆို မသောက်သုံးမီ သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရပါမည်။
Alpha Brain သည် ၆ နာရီကျော်ခံသည်။ Alpha Brain နှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားလွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုအချို့အရ ၇ နာရီမှ ၈ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။
၁၈-၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိကျန်းမာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအုပ်စုတွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Alpha ဦး နှောက်ကို ၆ ပတ်ကြာအသုံးပြုခြင်းသည်မကြာသေးမီကနှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များသိမြင်မှုတိုးမြှင့်များ၏လျှောက်လွှာဆီသို့ထပ်မံလေ့လာမှုထိုက်တန်ပါတယ် ဖြည့်စွက် အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်၌တည်၏။
Joe Rogan သည် Onnit ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီနှင့်တွဲဖက်ပြီး Alpha Brain ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်နှုတ်ဖြင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ Alpha Brain သည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သောစျေးကွက်ထဲမှထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Rogan ကသူသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်စကားလုံးများနှင့်စကားစုများကိုပြန်လည်မှတ်မိစေရန်ကူညီသည်ဟုယုံကြည်သည်။
ဤအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရာတွင် Onnit Aubrey Marcus ကိုတည်ထောင်သူက“ Alpha မှာ ဦး နှောက်ထဲမှာအမ်ဖီတမင်းတွေ (သို့) တခြားတားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်တားမြစ်ထားသောသို့မဟုတ်တရားမဝင်သောပစ္စည်းများပါဝင်မှုမရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အကုန်အကျခံ။ Alpha ဦး နှောက်၏အသုတ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးခြင်း။
Alpha GPC သည် ဦး နှောက်တွင်တွေ့ရသောသဘာဝရှိကလိုရင်းဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပဲပိစပ်နှင့်အခြားအပင်များတွင်တွေ့ရသောဖက်တီးအက်စစ်သည်ပျက်သွားသောအခါဤဒြပ်ပေါင်းကိုထုတ်လွှတ်သည်။ Alpha GPC သည်သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အရေအတွက်တွင်၎င်းကိုထောက်ပံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်, alpha GPC များသောအားဖြင့်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ် phosphatidylcholine-enricated soya phospholipids ၏ enzymatic deacylation မှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်သော Alpha GPC ပါ ၀ င်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ပုံစံများအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ Alpha GPC ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနသည်၎င်းသည် parasympathomimetic acetylcholine ရှေ့ပြေးအဖြစ် parasympathetic nervous system ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့် Alzheimer နှင့်စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုကုသရာတွင်တက်ကြွစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ Alpha GPC သည်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးသောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီးဤဒြပ်ပေါင်းများပါ ၀ င်သည့်ဖြည့်စွက်စာများသည်အစားအစာကိုလက်စ်၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုလက်စ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆဲလ်များကြီးထွားမှုနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်စသည့်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ Alpha GPC သည်ထိရောက်သော nootropic တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်၏သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသိမြင်မှုကျဆင်းမှုကြုံတွေ့သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာမှသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ Alpha GPC သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိကြီးထွားမှုဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိအားကစားသမားများသည်၎င်းတို့၏စွမ်းအားစုစုပေါင်းစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန် Alpha GPC ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအသုံးပြုကြသည်။
Alpha GPC ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသူတို့နှင့်အတူယူဆောင်လာသည်။ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Alpha GPC သည် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် dopamine ပမာဏတိုးပွားစေသည်။ လေ့လာမှုအတော်များများကဒီဝိုင်ကိုပိုကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် alpha GPC ဖြည့်စွက်မှုများသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောအမှုများမှာအလွန်နည်းပါးသည်။ ဦး နှောက်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း မှလွဲ၍ Alpha GPC သည်အယ်လ်ဇိုင်းမား၊ ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ယာယီသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်လုံလောက်သောအထောက်အထားများရှိသည်။ အားဖြည့်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်၎င်းဒြပ်ပေါင်းကိုအားကစားသမားများကအသုံးပြုကြသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် alpha GPC သည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခဲ့သည်။
Alpha GPC သည် putyl acetolcholine ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်ပြီး acetylcholine-stimulated catecholamine ၏လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။
ပလာစမာဝမ်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများအကြားဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အသင်းအဖွဲ့များမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ဤကြီးမားသောလူ ဦး ရေအခြေပြုလေ့လာမှုတွင်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းကိုလက်စ်ပြင်းအားကိုအန anx တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
Alpha Brain တွင် acetylcholine ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အရာနှစ်ခုပါဝင်သည်။ GPC choline, ခန္ဓာကိုယ်က acetylcholine အဖြစ်ပြောင်းသည်။ Huperzine A, Huperzia serrata ဟုလည်းလူသိများသည့်ကလပ်အသင်းမှရရှိသော Alkaloid ။
CDP choline သည်အန္တရာယ်ရှိသောဆေးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းစနစ်အပေါ်အလေးအနက်သက်ရောက်မှုမရှိသောကြောင့်လုံးဝသည်းခံနိုင်သည်။
noopept ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအိပ်စက်ခြင်း (၅/၃၁ လူနာ)၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း (5/31) နှင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်း (3/31) (Neznamov နှင့် Teleshova, 7) တို့ဖြစ်သည်။ preclinical သုတေသနမှလုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများကြွက်များတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုက noopept သည်သွေးကြော ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်သွားသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
Alpha GPC သည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Alpha GPC သည် dopamine ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုများစွာအကျိုးပြုသည်။
အရက်မပါသော fatty အသည်းရောဂါ (NAFLD) ဟုလူသိများသောအသည်းအသည်း၊
သွေးလွန်ကျောက်ကပ် necrosis ။
အူ၊ ငါး၊ နို့နှင့်ကြက်ဥတို့သည်အချိုဆုံးသောဓာတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ အသီးအရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အစေ့များအားလုံးတွင်ကိုလက်စ်ဓာတ်ပါ ၀ င်သောကြောင့်သက်သတ်လွတ်စားသူသို့မဟုတ်အပင်အခြေခံသောအစားအစာများတွင်လူများစွာအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
အူ၊ ကြက်ဥနှင့်အသားနီတို့ကဲ့သို့သောကိုလက်စ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများသည်ပြည့်နှက်နေသောအဆီများတွင်များသော်လည်းများသောအားဖြင့်ဆော်လမွန်၊ ကော့ဒ်၊ တီလားပီးယား၊ ကြက်သားရင်သားနှင့်ပဲပင်များအပါအဝင်ပြည့်နှက်နေသည့်အဆီများတွင်လည်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ယခုလက်ရှိကာလဝမ်းရောဂါရှိသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမရှိသေးပါ။ Plasma choline, betaine နှင့် phosphatidylcholine ပါဝင်မှုများသည်လူတို့တွင် choline- deficiency diet ကျွေးမွေးသော်လည်းလျော့နည်းသွားသည်မှာ ၃၀% မှ ၅၀% အတွင်းကျဆင်းသွားသည်။
အကြီးစားစူးစမ်းလေ့လာမှုများကကာလဝမ်းရောဂါနှင့်သွေးအဆင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မှတ်ဥာဏ်နှင့်ပြုပြင်ခြင်းအပါအ ၀ င် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။ ဖြည့်စွက် 1,000 မီလီဂရမ် တစ်နေ့လျှင် ၅၀ မှ ၈၅ နှစ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်နည်းသောအရွယ်ရောက်သူများအတွက်တိုတိုနှင့်ရေရှည်နှုတ်မှတ်များကိုတိုးတက်စေသည်။
Citicoline သည် cytidine-diphosphocholine (CDP choline) နှင့်ဓာတုဗေဒနှင့်တူညီသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းအမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ CDP choline သည်လူသားများတွင်သဘာဝဖြစ်ပြီး၊ citicoline သည်အာဟာရဖြည့်စွက်စာများတွင်တွေ့ရသောပုံစံဖြစ်သည်။
Citicoline သည် acetylcholine, norepinephrine နှင့် dopamine အပါအ ၀ င် neurotransmitter တွေရရှိနိုင်မှုအားဖြင့်ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် citicoline ၏ choline အစိတ်အပိုင်းသည် acetylcholine ကိုတီထွင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လူ့ ဦး နှောက်၏အဓိကအလုပ်အမှုဆောင် neurotransmitter ဖြစ်သည်။
Phosphatidylcholine သည်ဥ၊ ပဲပုပ်၊ မုန်ညင်း၊ နေကြာနှင့်အခြားအစာများတွင်ပါဝင်သောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ “ phosphatidylcholine” ဟူသောဝေါဟာရကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လက်ဆီသင်နှင့်လဲလှယ်အသုံးပြုသည်။ လက်ဆီသင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Choline သည် phosphatidylcholine တွင်ပါဝင်သည်။
ဤကြီးမားသောလူ ဦး ရေအခြေပြုလေ့လာမှုတွင်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းကိုလက်စ်ပြင်းအားကိုအန anx တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
ပလာစမာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများ choline (သို့) အချို့သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည် neurotransmitter များအတွက် ဦး နှောက်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ဦး တည်သည်။ acetylcholine အတွက် choline, serotonin အတွက် tryptophan နှင့် catecholamines များအတွက် tyrosine ။
တစ် ဦး fishy ခန္ဓာကိုယ်အနံ့။
အဆီ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတွင်ကိုလင်းသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အဆီကျသည်။ ဤသည်ကိုလက်စ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အသည်းအသည်း (သို့) သွေးထဲရှိအဆီပိုများသည့်အခြေအနေမျိုးကိုကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လက်ဆီသင်ကိုမှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတို့အတွက်ကုသသည်။ အသည်းရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါအချို့၊ မြင့်မားသောကိုလက်စထရော၊ စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အရေပြားရောဂါတို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်အချို့လူများ၌ရင်ပူခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်းနှင့်အရေပြားအဖုအပိမ့်များစသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရိုက်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ပေးသည့်အခါသင့်လျော်စွာအသုံးပြုသောအခါ Alpha GPC သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆေးထိုးသည့်နေရာ၌ပူလောင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်နီခြင်းတို့အပါအဝင်အချို့လူများတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစားအစာတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည့်ပုံစံများမှာဖော့စဖိတ်ဒိုင်ခလင် (ပီစီ)၊ ဖော့စဖိုးကိုလင်း၊ အယ်လ်ဖာ -GPC၊ sphingomyelin, CDP-choline နှင့်အခမဲ့ကိုလင်းတို့ဖြစ်သည်။ Phospholid, free choline နှင့် alpha-gpc တို့သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး phosphatidylcholine နှင့် sphingomyelin တို့သည်အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည်။
Alpha Brain သည်အလုံခြုံဆုံး nootropic ဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီးစားသုံးခြင်းတို့တွင်သင်သည်အသေးအဖွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးကိုမှီဝဲပြီး nootropic ဖြည့်စွက်ဆေးများမသောက်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်။
Alpha GPC ၏အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအားလုံးသည်၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်၎င်း၏နေ့စဉ်ကန့်သတ်ချက်အတွင်းသုံးစွဲသောအခါလုံးဝလုံခြုံမှုရှိသည်ဟုတညီတညွတ်တည်းသဘောတူကြသည်။ သို့သော် Alpha GPC ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပူပြင်းခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Alpha GPC ၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ယခုအချိန်ထိလေ့လာခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်အမျိုးသမီးများသည်ဤဝိုင်ကိုမစားသုံးသင့်ပေ။ အလားတူစွာ၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ရှိပြီးသားအခြေအနေတစ်ခုရှိလျှင်၊ Alpha GPC ဖြည့်စွက်စာမစတင်မှီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးသောက်သည့်အခါ Alpha GPC သည်ကောင်းစွာသည်းခံနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူအများစုအတွက်လက်ခံနိုင်သောဆေးပမာဏသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်လျှင် ၃၀၀-၁၂၀၀ မီလီဂရမ်တိုးပွားလာသောနေ့စဉ်သောက်သုံးမှုသည်လုံခြုံပြီးအကျိုးရှိသည်။
အထူးသဖြင့်အချို့သော neurotransmitter များ၏လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်တားစီးမှုမှတဆင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊ တိုးတက်စေခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်နိုင်သည့်အရာများ - nootropics ၏အလွဲသုံးစားမှုသည်လူ့ ဦး နှောက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်းရှိသူအချို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ မမှန်မှုများ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။ ဦး နှောက်သည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်ဗဟိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဦး နှောက်တွင်းရှိအလုပ်မလုပ်သောအလုပ်များသည် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ စကားပြောဆိုမှုပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ကိုလင်းသည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာများတွင်များစွာသောခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုလင်းကိုပေးသောဒြပ်ပေါင်းများပါ ၀ င်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုမှာ Alpha GPC ဖြစ်သည်။
ကော်ဖီတွင်ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်သောကြောင့်၎င်းကို nootropic ဟုသတ်မှတ်သည်။ ကဖိန်းဓာတ်သည်အဓိကအားဖြင့်နိုးကြားမှုနှင့်စိတ်ကိုတိုးစေသည့်ရေပန်းစားသော nootropic ဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခေါ်သော“ စမတ်ဆေးများ” ဟုခေါ်သည့် Nootropics သည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေပြီးမှတ်ဥာဏ်နှင့် ဦး နှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်ပြုလေ့လာမှုတစ်ခု alpha GPC စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုအရ ၆၀၀ မီလီဂရမ်သောက်ခြင်းသည်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း၏ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးစေကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့် alpha GPC သောက်သုံးမှုသည် ၃၀၀ မှ ၆၀၀ မီလီဂရမ်အကြားရှိပြီးအားကစားသမားများအားအထက်အကန့်အသတ်နှင့်သာလိုက်နာရန်အကြံပြုသည်။
သို့သော်သိပ္ပံနည်းကျကျဆင်းခြင်းကိုကုသရာတွင် Alpha GPC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသည့်လေ့လာမှုအားလုံးနီးပါးသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ဆေးပမာဏကို ၄၀၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်သုံးပိုင်းခွဲခြားသည်။ ဒီသောက်သုံးသောပမာဏအတွက်တစ် ဦး ကတစ်နေ့လျှင် 1200 မီလီဂရမ်သောက်သုံးသောကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမား၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့် TIA ခံစားနေရသောလူနာများကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးရန်အကြံပြုပါသည်။
၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောသိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် CBD ကို nootropic ဟုသတ်မှတ်သည်။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူကူညီရန် CBD ၏အလားအလာကိုသုတေသီများစွာသည်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
① အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကို ကုသရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်ဤဒြပ်ပေါင်း၏စွမ်းရည်ကို Alzheimer ၏ကုသမှုနှင့်အတူကူညီရန်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ Alpha GPC သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ acetylcholine ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ Acetylcholine သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သိမှတ်မှုတိုးတက်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာလေ့လာမှုအရသွေးတိုးရောဂါရှိသူများတွင် ဦး နှောက်အတွင်းရှိသွေးကြောများအတွင်းရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီး ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
သုတေသနပြုချက်အရအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူနာများသည်နေ့စဉ် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ် G alpha GPC ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဤသောက်သုံးသောပမာဏသည် ၃ လမှ ၆ လအထိကြာရှည်ခံရန်အကြံပြုထားပြီးဤသေစေလောက်သောရောဂါခံစားနေရသည့်လူများ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
② ၎င်းသည် Dementia ကို ကုသရာတွင် ကူညီပေးသည်။
လူများစွာသည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကြားရှုပ်ထွေးကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပထမနှစ်ခုနှင့်ခြားနားချက်ကိုသတ်မှတ်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းသည်ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး ၏စိတ်စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုကိုလူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစတင်စတင်သည့်ကာလအထိလူတစ် ဦး ၏စိတ်စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားသည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်စိတ်ဖောက်ပြန်လူနာများအပေါ် alpha GPC စားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရခြောက်လကျော်ပုံမှန် alpha GPC စားသုံးမှုသည်နူးညံ့ပြီးအလယ်အလတ်စိတ်ရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက်သိကျွမ်းခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ အလားတူပင်အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုကပုံမှန် alpha GPC စားသုံးမှုနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့် ဦး နှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများခံစားနေရသောလူနာများအားပိုမိုသိကျွမ်းလာမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုခံစားနေရသောလူများသည်တစ်နေ့လျှင်သောက်ဆေး ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးခြင်းမှများစွာအကျိုးပြုနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူနာများတွင် Alpha GPC စားသုံးမှုသည်အပြုအမူ၊ စိတ်နှင့်သိမြင်မှုတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
③ Transient Ischemic Attacks များကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။
ယာယီသွေးကြောဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုများ (TIA) သည် ဦး နှောက်နှင့်မျက်စိကိုသွေးပို့ခြင်းအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတိုချုပ်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ ယာယီသွေးလည်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုများသည်များသောအားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသော်လည်း၎င်းတို့ကိုလေဖြတ်ခြင်း၏ရှေ့ပြေးအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ Alpha GPC ၏လေဖြတ်ခြင်းနှင့် TIA လူနာများအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအရ ၂၈ ရက်အတွက်နေ့စဉ် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ် Alpha GPC ရိုက်ချက်များ၊ ၆ လကြာ Alpha GPC (ပါးစပ်အစီအမံများ) ဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်သောက်သုံးသူများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေးအခေါ်စွမ်းရည်ရှိကြောင်းနှင့် TIA မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြောင်းလေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ။
④ ၎င်းသည် ထိရောက်သော Nootropic အားဖြည့်ဆေးကို ပြုလုပ်ပေးသည်။
Acetylcholine သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် neurotransmitter အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီးမှတ်ဥာဏ်နှင့်သင်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Alpha GPC သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိဤဓာတုပစ္စည်းကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးမှတ်ဥာဏ်နှင့်သိမှတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် alpha GPC ကို nootropic dietary supplement များတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
⑤ ၎င်းသည် အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။
အားကစားသမားများတွင် alpha GPC စားသုံးမှုသည်လေ့ကျင့်ခန်းအားဖြင့်သွေးလည်ပတ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်ကြီးထွားလာသောဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်တိုးတက်ခြင်းတို့နှင့်လည်းဆက်နွှယ်သည်။ ထို့ကြောင့်နည်းပြများနှင့်သင်တန်းပို့ချသူများသည်အားကစားသမားများကိုပိုမိုအားကောင်းသောကြွက်သားစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန် alpha GPC ကိုစားသုံးရန်အကြံဥာဏ်ပေးလေ့ရှိသည်။
(1) ။ အမေရိကန်အမျိုးသားဆေးပညာစာကြည့်တိုက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအင်စတီကျု၊ Gatti G၊ ဘာဇဂီနီ၊ အက်တိုတိုဂျီ၊ Abbiati ဂျီ၊ ဖော့စတီတီတီ၊ ပီရူးအီး၊ ၁၉၉၂ စက်တင်ဘာ၊ ၃၀ (၉) - ၃၃၁-၅ ။
(2) ။ Doggrell လုပ် SA & အီဗန် S; အီဗန် (အောက်တိုဘာ 2003) ။ "neurotransmission မော်ဂျူလ်နှင့်အတူစိတ်ဖောက်ပြန်၏ကုသမှု" ။ မူးယစ်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ယူဆချက်။ 12 (10): 1633-1654 ။
(3) ။ Parnetti, Lucilla; et al ။ (2007) ။ "သိပ္ပံနည်းကျချို့ယွင်းမှုကုသမှုတွင် Cholinergic ရှေ့ပြေး - ထိရောက်မှုမရှိသောချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ချက်လား။ " အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်။ 257 (1-2): 264-9 ။
(4) ။ egt စူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီး။
(5) ။ Oleoylethanolamide (oea) - သင့်ဘ ၀ ရဲ့မှော်အရိပ်။
(6) ။ Anandamide vs cbd: ဘယ်ကျန်းမာရေးကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့ကိုသင်သိထားသင့်သမျှ
(7) ။ နီကိုတင်းနိုက်ရိibosideကလိုရိုက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှ။
(8) ။ မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ: အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
(9) ။ Palmitoylethanolamide (ပဲ): အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အသုံးပြုမှု, ဖြည့်စွက်။
(10) ။ resveratrol ဖြည့်စွက်၏ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို6။
(11) ။ phosphatidylserine (ps) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(12) ။ pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(13) ။ Nikotinamide mononucleotide (nmn) ၏အိုမင်းခြင်းကိုခံသောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်။
alpha-gcc သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ ဦး နှောက်တိုးမြှင့်ချင်နေ့ရက်ကာလ၌ 150mg ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျွန်တော်အံ့အားသင့်ခဲ့မိတာကအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုကောင်းမွန်စွာမြှင့်တင်နိုင်စွမ်းပါ။ ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားအနေနှင့်၎င်းသည်စာသားအရ PED ဖြစ်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ကိုပိုမိုခံစားရသည်။
ငါအခုပဲ 300mg ပဲ2လဖြောင့်ကယူ။ စိတ်ဓာတ်မကျဘူး အားကစားရုံအတွက်စွမ်းအင်ပဲ။
နေ့တိုင်းမနက် ၃၀၀ မီလီဂရမ်သောက်ပါသည်။ ငါပထမနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကျနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ရက်အနည်းငယ်အနားယူသည်။ ငါအနားယူပြီးပြန်လာတဲ့အခါငါအရမ်းခက်သွားပြီးတစ်ည၊ နှစ်အိပ်မက်တွေအတွက်အရမ်းတော်တဲ့အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့တယ်။ အလွန်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းမဟုတ်။ အဲဒါငါ့အကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ပါဘူး ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်တစ်သက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြိန်ခြင်းကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်။ ငါကပိုပြီးအာရုံစိုက်ပြီးလူမှုရေးအရနိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးပြီ၊ ငါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တွေပိုများလာတယ်။ စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ပြောတဲ့သူတိုင်းကိုငါအသိအမှတ်ပြုတယ်။ ပြီးတော့အလွန်အမင်းကိုလိုနီစိတ်ဓာတ်ကျမှုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအရာဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့တစ်နေ့တာကိုတကယ်ပျက်စီးစေလိမ့်မယ်ဆိုတာငါဝန်ခံတယ်။ ဒီတော့ဘယ်သူ့ကိုမှဒီစာကိုဖတ်ပြီးအဲဒါကိုကြိုးစားဖို့စဉ်းစားနေရင်၊ ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးဆေးထိုးခြင်း၊ တစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ခြားနေ့ရက်များမှာစလုပ်ပြီးသင်ဘယ်လိုခံစားနေသလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
ငါအများကြီးလေ့လာနေဒါကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုငါ့အဘို့အလွန်သိသာပါပြီ။ ငါ 150-300 မီလီဂရမ်ယူပါ။